Iyakhula eyombango womhlaba eNadi | News24
Iyakhula eyombango womhlaba eNadi
SELOKU kwakhothama Inkosi yesizwe saseNadi ngonyaka wezi-2013 umphakathi wakule ndawo usuzwakalise ukunganami kwawo ngokwabiwa kwezindawo kule ndawo.
Imiphakathi ehlukene engaphansi kwalesi sizwe ikhala ngokuthi izinduna zizama ukubaqhatha ngokubadayisela izindawo bese ziyabaphuca zidayisele abanye futhi izindawo ezifanayo.
Lokhu kuvele ngemuva kokuba i-Echo ishicilele udaba lukaMnu Thulani Maduna ngesonto oledlule mhla zingama-21 kuNhlangulana (June) nalapho kade ekhala khona ngokuthi induna yasendaweni yaKwaShange uMnu David Shange wamudayisela izindawo ezimbili zokwakha ngemali engu-R1200 indawo iyodwa nokwathi uma esethi uyokwakha wathola ukuthi indawo yakhe isidayiselwe omunye umuntu.
Uthi wathi uma eyobuza induna yabe isimusongela ngokuthi akangulusukumeli lolu daba ngoba izomufundisa isifundo.
Kusukela lapho amalunga omphakathi ahlukene ngaphansi kwesigodi saseNadi asephumele obala asho ukuthi nawo abhekene nenkinga efanayo kanti lolu daba seluze langenelelwa nanguNdlunkulu weNkosi endala uMnu Shayabantu, uMaKhanyile nothe akahambisani neze nokwenziwa izinduna esho nokuthi sebefuna uMnyango wezokuBusa nokuBambisana naMakhosi oMdabu ungenelele.
UNdlunkulu nophinde abe senhlanganweni elwela amalungelo abantu kwezomhlaba i-Rural Women Movement uthe ngesikhathi kukhothama Inkosi ngonyaka wezi-2013 izinduna zatshelwa ukuthi azime ukwaba izindawo kuze kube khona ibamba le Nkosi nokuyilona elizokhipha umyalelo ukuthi sebengazaba izindawo.
“Sengithule kakhulu ngiyibekezelela lento kanti futhi nabo ngibatshelile eMkhandlwini ukuthi uma kungukuthi abayiyeki lento abayenzayo ngizoyilwa kuze kube benza izinto ngendlela.
Bazaba kanjani izindawo ekubeni ingekho iNkosi ngoba iyona ekumele ikhiphe lowo myalelo?
Ngonyaka ka-2013 ngajutshwa inhlangano yami ukuba ngihambe ngiyobheka indlela lowa mkhandlu osebenza ngayo.
Ngathuka kabi uma ngithola ukuthi ngosuku olulodwa kwakunamacala ali-11 okubangwa komhlaba.
Abantu abathathu badayiselwa umhlaba owodwa,” kubeka yena.
Uqhube wathi wabatshela ukuthi kumele balulungise lo daba lo mhlaba kodwa kuze kube imanje abantu basanenkinga efanayo.
Uthe sebeyasaba ukuba uma kungukuthi lo mbango uyaqhubeka kuzogcina sekuchitheke igazi.
“Abantu bakhokhiswa izimali eziningi ezingafani futhi uma babelwa umhlaba kodwa uma sebenikezwa ubufakazi bokuthi bakhokhile banikezwa iziliphu ezibhalwe ukuthi bakhokhe imali ewu-R20.
Abanye abantu abazitholi kwazona lezo ziliphu zokuthi kunemali abayikhokhile. Ngesikhathi Inkosi ikhothama abantu babekhokha u-R520 ubani ke lo osewayinyuka yaze yafika ko-R1200 nako R5000 ekubeni lingekho ibamba leNkosi?
Ngizamile ukuluxoxa nomkhandlu lolu daba ngibatshela ukuthi lento abayenzayo ukukhwabanisa kodwa abafuni ukulalela.
Njengoba lezi zinduna ziyekwa ziqhubeka nokwaba umhlaba ekubeni zatshelwa ukuthi azingawabi, Inkosi ezolandela izofika itholeni ngoba umhlaba uzobe ungasekho?,” kubeka undlunkulu uMaKhanyile.
UMnu Makhaye wasendaweni yakaMyandu uthe naye usephumele obala wathi unenkinga njengoba induna isinikeze abanye abantu indawo yakubo enamathuna abazali bakhe kanye nabantu abadala bakubo.
Uthe wazama ukululwa lolu daba waze wafika nasemkhandlwini kodwa wafika wathola ukuthi abantu abanikezwe indawo yakubo bakhokhe imali enkulu ukuze bayithole.
“Kumanje sebakhile phezu kwamathuna asekhaya ayikho nento esizoyenza ngoba phela babelwa induna kanti futhi banemali yokukhokha thina asinayo imali yokukhokha.
Angazi ukuthi sesaya kangaki emkhandlwini sithi siyolwa lolu daba kodwa kuzinhlanga zimuka noboya.”
Imizamo yokuxhumana noNdlunkulu okhona njengamanje ibhuntshile kanti ngesonto eledlule induna uShange wathi ngeke akwazi ukuphawula ngodaba lomhlaba ngoba selusemkhandlwini.